Taageerayaasha ISIS oo jabsaday Websiteyo France laga leeyaha - Wargane News
Home Somali News Taageerayaasha ISIS oo jabsaday Websiteyo France laga leeyaha
Qaar kamid ah websiteyada maamulada magaalooyinka dalka France ayaa waxaa jabsaday kooxo taageersan kooxda ISIS kuwaasi oo calanka ISIS ku dhajiyey wajiga hore ee websiteka isla markaana u hanbalyeeyey kooxdii geystay weerarkii Arbacadii lagu qaaday Jornaalka Charlie Hebdo.
Websiteyada la jabsaday waxaa kamid ah kuwa Dowladaha Hoose ee magaalooyinka, Jouy-le-Moutier, Piscop, Goussainville, Val D’Oise iyo Ezanville. Dhamaan magaalooyinkan ayaa u dhaw caasimada Paris.
Wajiga hore ee Websityadaasi la jabsaday ayaa la dhigay calanka ISIS, waxaana qaarkood lagu qoray erayo ay kamid ahaayeen:
( Guul Maamulka IS, Ha dhacdo France, Hala Dilo Charlie Hebdo, Falastiin ha hesho Xoriyadeeda…) iyo erayo kale.
Macada illaa iyo hada cida ka danbeysa falkan oo lagu soo beegay xili wadanka France si weyn looga dareemay saameyntii weerarkii Arbacadii lagu qaaday xarunta Jornaalka Charlie Hebdo iyo waliba dhacdooyinkii ka danbeeyey ee afduubkii kooxahaasi jimcihii geysteen.
Somaliland: Suldaanku Isaga Ayaa Xadkiisa Soo Dhaafay Guddoomiye Shabeel…